राजनीतिको पुस्ता तयार गर्याैं, अब उद्यमीको नयाँ पुस्ता तयार गर्न लाग्नुपर्छ : पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
HomePoliticalराजनीतिको पुस्ता तयार गर्याैं, अब उद्यमीको नयाँ पुस्ता तयार गर्न लाग्नुपर्छ : पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
Admin 1/05/2018 03:41:00 PM
राजनीतिक कोर्स सही दिशामा गए अबको केही हप्तामा नयाँ सरकार बन्नेछ । जनादेश अनुसार अब बन्ने सरकार एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको बहुमतको हुने अनुमान सबैले गरेका छन् । वाम गठबन्धनको सरकार बने देशको अर्थनीति, प्राथमिकता र कार्यक्रम के - कस्ता हुने छन् भन्नेबारे एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेका विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
एमाले सरकारको समयमा सफल अर्थमन्त्री छवि बनाएर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएका पाण्डे भावी अर्थमन्त्रीको समेत दावेदार पनि हुन् ।
वामपन्थीको सरकार भएपछि सबै क्षेत्रमा सरकारको लगानी हुन्छ । त्यहाँ नीजि क्षेत्रको लगानी साँघुरिन्छ भन्ने तर्क र हल्ला बाहिर फिजाइएको छ त्यसमा पनि म सहमत छैन । नेपालको सबै भन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो । लाखौँ यूवा रोजगारी नपाएर वा भनेजति तलब नपाएर दैनिक विदेश उडेका छन् । नेपाल सरकारले हाराहारी साढे सात लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ ।
सात लाख मान्छेलाई पाल्नका लागि ६ सय अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको खर्च हुन्छ । ६ सय अर्ब राजश्व उठ्छ, सबै पैसा तलब मै र्खच हुन्छ । अब यो देशमा अर्को ७ लाख जानतालाई रोजगारी सृजना गर्न अर्को ६ सय अर्ब निकाल्नु पर्यो । अब रोजगारी कै लागि १२ अर्ब चाहियो । अनि राजश्व उठे जतिले कर्मचारी पालेर देश चल्छ ? करीब १४ लाख मानिसलाई राज्यले पालेर बाँकी जनता काहा जाने ? त्यस कारण पनि निजी उद्यम विकास गर्नु अनिर्वाय छ । त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्छौं ।
रोजगारी समस्या हल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको विकास अनिवार्य नै हो । सरकारले निजी क्षेत्रको उद्यमशिलता विकास गर्नका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । विगतमा हामिले राजनीतिको पुस्ता तयार गर्यौँ अब उद्यमिको नयाँ पुस्ता तयार गर्न हामी लाग्नुपर्छ । उनीहरू मार्फत रोजगारीको सृजना गरिनुपर्छ । उद्यमी निर्माण गर्ने पुर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग बने बापत करिब १० लाख मानिसले रोजगारी पाए । टाँगा गाडा चलाउने देखि होटल, रेस्टुराँ लगायतका कयौँ रोजगारी राजमार्ग निर्माणले सृजना गर्यो । अब भन्नुस् सरकारले यस्ता तीन चार ओटा राजमार्ग बनायो भने के हुन्छ ? कायापलट हुँदैन ? त्यसैले सरकारले स्व:उद्यम र नीजि उद्यमको विकास लागि पूर्वाधार तयार गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । यो मोडलमा अब सरकार चल्छ । यो देश नीति नभएर पछि परेको होइन, कार्यन्वयन नभएर पछि परेको हो । हाम्रो देश गरिब नै छ तर पूँजीगत बजेट पूर्ण सिलिङमा खर्च हुन सक्दैन ।
सरकार पूर्वाधार निर्माणको ठूलो र फराकिलो बाटोमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेर अगाडी बढ्नु पर्नेछ । नीजि क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, साना विद्युत आयोजना, बैंक जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यसको अर्थ यी दुई निकायले काम गर्ने बाटो अहिल्यै छुट्टिएका छन् । सरकार ठूला लगानीका पूर्वाधारमा नै बढी केन्द्रीत हुनेछ । त्यसको अलवा शिक्षालाई राजनीतिक हक मानेर पहिलो प्राथमिकता तय गरेर अगाडि बढ्नेछ । कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षा क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।
वाम गठबन्धनको महत्वपूर्ण अंश माओवादी राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थातर्फ जान्छ की भन्ने भयमा सत्यता छैन । माओवादी, एमाले भन्दा पनि उपभोक्तावादी सोच भएको पार्टी हो । कुनै एक समयमा राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबारे चर्को भाषण गर्ने माओवादी नेताहरू पटक-पटक अर्थ मन्त्री बनिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर देशको समग्र अर्थ व्यवस्थाबारे जानकारी भईसकेपछि सबै चर्का कुरा सेलाउँछन्।